Soo -saareyaashu waa inay iska bixiyaan barnaamijyadan Google ee Android | Androidsis
Kuwani waa barnaamijyada Google ee loogu talagalay Android ee soo-saarayaashu ay bixin doonaan
Isla toddobaadkan warku wuu faafay. Google ayaa ku dallacaya soo saarayaasha taleefannada barnaamijyadooda qaarkood loogu talagalay Android. Go'aanka shirkadda ayaa tka dib ganaaxa ay shirkadda Mareykanku ka heshay Midowga Yurub, iyadoo ay ugu wacan tahay booska ay ku badan tahay Android. Waxaa laga faallooday in shirkadaha soo saara taleefanada aysan ku bixin doonin dhammaan codsiyada, laakiin kaliya ay bixin doonaan qaar ka mid ah kuwa gaarka ah.
Ugu dambeyntiina, magacyada barnaamijyadan Android-ka ah ayaa la shaaciyay oo Google ay tahay inay lacag ku bixiso. Illaa 40 yuuro ayaa la bixin doonaa dalab kasta, ee sharcigan cusub ee dhaqan galaya Oktoobar 29.
Shirkaddu hadda waa inay samaysaa shatiyada shirkadaha wax soo saara. Dhinac waa inay helaan shahaado Google Play iyo dhinaca kale waa inay helaan bixiso shatiga Adeegyada Mobaylka Google (GMS) dhanka kalena waa inaad heshaa rukhsad gaar ah oo loogu talagalay barnaamijyada sida Chrome ama Google. Wax macnaheedu yahay kharashka badan ee soo saarayaasha Android, ee ku iibiya Yurub.
Soo-saareyaasha ku shaqeeya Android hadda waa inay bixiyaan illaa $ 40 si ay warshad ugu rakibaan qaar ka mid ah 9-ka codsi ee ku jira ururinta GMS. Waxay ahaayeen 11 guud ahaan, laakiin barnaamijyada Chrome iyo Google ayaa laga saaray liiska. Codsiyada aad bixin doontid waxay noqon doonaan:
Muusikada Google Play
Filimada Google Play
Liisanka Adeegyada Mobile-ka ee Google waa mid aasaasi ah, oo ay lagama maarmaan u yihiin soosaarayaasha ku shaqeeya Android si ay u awoodaan inay haystaan ​​Play Store taleefannadooda. Marka lagu daro sagaalka codsi ee liiska ku jira, Google APIs ayaa lagu soo daray, kuwaas oo na siinaya iswaafajin la mid ah barnaamijyada ku jira Play Store. Laysankaan la'aan taleefanku ma lahaan karo Google Play.
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in qiimaha liisamadaasi ay sidoo kale ku xirnaan doonaan dalka iyo shaashadda taleefanka. Qiimaha ugu badan ee soo saaraha Android ay tahay inuu bixiyo wuxuu noqonayaa 40 doolar, kaas oo loogu talagalay taleefannada ku jira heerarka sare. Marka sida ugu fiican ee taleefanka, ama ka weynaado, ayaa sare u kacaya qiimaha aan ku bixin doonno liisanka.
Kuwa soo saarayaasha telefoonada Android ee doonaya inay dhexgalaan Google Lens, Chrome, mashiinka raadinta Google, Kaaliyaha Google ama Podcasts, waa inay bixiso liisanka cusub ee gaarka ah. Liisankaan cusub, dalabyadii hore ee aan soo sheegnay ayaa lagu daray, marka lagu daro labadii codsi ee ganaaxa loogu riday shirkadda Mareykanka ah (Chrome iyo barnaamijka Google).
Xaaladdan oo kale, qiimaha liisankaan cusub lama xadidin. Saas ma aha, waa qiimo gorgortan ah, si shirkadaha soo saara taleefannada Android ay awood ugu yeeshaan inay heshiis la gaaraan shirkadda. Tan macnaheedu waa inay macquul tahay inay iyagu qayb ahaan iyagu iska bixiyaan, ama xitaa waa macquul inayna iyaguba bixinaynba. Waxay kuxirantahay heshiiska la gaadhay iyo codsiyada kujira heshiiska labada dhinac.
Haddii soo-saaruhu gaaro go'aanka lagu daro dhammaan codsiyada Google, waxaa laga yaabaa inaadan bixin wax isku mid ah. In kastoo xaalku ahaado, waxay kuxirantahay gorgortanka. Laakiin layaab malahan in soosaarayaasha waawayn ee Android aysan waxbo bixin doonin ama ay yeelan doonaan kharash astaamo ah. Ka fikir shirkadaha sida Samsung ama Huawei, oo leh awood gorgortan weyn, iyo sidoo kale suuq weyn.
Telefoonada leh nooca loo yaqaan "Android One", ma jiri doono wax isbedel ah. Waxaa la xaqiijiyay in qaybtan nidaamka qalliinka, Google ay kujirto ruqsad kale, oo ay heshiisyo la gaari doonto soo saarayaasha. Marka waxaa la rajeynayaa in soosaaraashu aysan wax lacag ah ku bixin doonin barnaamijyadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Kuwani waa barnaamijyada Google ee loogu talagalay Android ee soo-saarayaashu ay bixin doonaan
Si fiican uga faa'iideyso Waze tilmaamahan
Sida loo kiciyo keydinta xogta barta Instagram